सी ई ओ अन्प्लग् २०१९ सिक्न, नेटवर्क र उद्यमी विचार साझेदारको लागि एक मौका
कठमाडौँ, पौष २५, २०७५स् देशको सबैभन्दा प्रभावशाली सी ई ओहरुद्वारा मानसिकता विकाशलाई प्रेरीेत गर्न ग्लोकल प्रा. लि र किंग्स कलेजको सहकार्यमा आयोजना गरिएको ‘सी ई ओ अन्प्लग् २०१९’ को चौठो संस्करण Hotel Soaltee Crowne Plaza, काठमाडौँमा सफलतापूर्वक समाप्त भएको छ ।
Today Meets Tomorrow’ को मुख्य विषयमा रही आयोजना गरिएको कार्यक्रममा देशक १५ प्रतिष्ठित उद्यमीहरू उपस्थित भएका थिए । यस वर्ष १०० भन्दा बढि इच्हुक सहभागीहरुले यस कार्यक्रममा सिक्न, नेटवर्क कायम गर्न र देशका प्रमुख उद्यमीहरुको साथ आफ्नो विचार साटासाट गर्न सहभागी भएका थिए ।
सो कार्यक्रममा Key note Speaker को रुपमा Vaidhya’s Organization of Industries and Trading Industries (VOITH) का अध्यक्ष्य Suraj Vaidhya ले आफ्नो विचार धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । आफ्नो जीवनको सिकाई र अनुभवबाट सिक्नु भएको अनुभूतिहरु उहाले यस कार्यक्रममा बताउनु भयो । जीवनमा सिक्ने प्रक्रिया कहिले अन्त्य हुँदैन, जीवन साईकलका ती पांग्र जस्तै हुन, जुन क्षण हजुर रोकिनुहुन्छ, त्यहि क्षण सोच्नुस् हजुर लड्नु भयो, व्यावसाय पनि त्यस्तै हुन्छ त्यसैले सिक्ने, नवरचना र नयाँ जोखिमहरू लिन कहिल्यै नछाडनुस ।
त्यसतै गरी Nepal Tourism Board का CEO Deepak Raj Joshi ले पनि आफ्नो विचारहरु प्रस्तुत गर्नु भएको छ । नेपाल सम्भावनाले भरिपुर्ण देश हो, तर हामीले समस्या मात्र देख्ने गरेका छौ । त्यसैले म हाम्रो देशका युवा शक्तिलाइ समस्याका साथसाथै सम्भावना पनि हेर्न अनुरोध गर्द छु । आफुमा परिवर्तन ल्याउनुहोस, इतिहासबाट सिक्नुहोस, बर्तमानमा खट्नु होस । यसरी नै आजले भोलिलाई पच्छ्याउने छ । पर्यटनमा युवाको योगदानका बारेमा बोल्दै उहाले थप्नुभयो “आन्तरिक पर्यटन बिना पर्यटन क्षेत्रको बिकास सम्भव छैन ! त्यसैले युवा भएर सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित नहुनु, आफ्नो देशको भूभाग नियाल्नुस ।"
तिन अलग अलग प्यानलमा प्यनलिस्टहरुले दर्शकहरु माझ पहिलो प्यानल विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो । पहिलो प्यानलमा Future of SMEs of Nepal मा अन्तरक्रिया भएको थियो । जसमा प्यानलको मध्यस्कर्ता Foodmario
का Founder रोहित तिवारीले गर्नु भएको थियो ।
पहिलो प्यानलको लागि Sushama Sharma, 1st Vice- President of NWC SME; Sixit Bhatta, CEO, Tootle and Sunita Nhemaphuki, Co-founder, R&D Innovative Solutions हरु प्यनलिस्टको रुपमा उपस्थित हुनु भएको थियो ।
हालको तथ्यांक अनुसार, अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान कम भएको ठिक होकी होइन भन्ने प्रस्ङमा, Ms. Sunita Nhemaphuki, Co-Founder of R&D Innovative Solutions ले मबतब केहि हदसम्म सही हुन सक्छ किनभने नेपालमा, मुख्य समस्या यो हो कि हाम्रो उत्पादनले हाम्रो खपत पनि पूरा गर्दैन । उदाहरणको लागि, हामी मकै उत्पादन गर्छौं तर एयउअयचल लागि उच्च मांग छ । जसरी, हाम्रो कृषि उत्पादनको बजार दयनीय छ जसले गर्दा डेटामा कमी पैदा गर्दछ । तर यदि हामीले कृषिको लागि मार्केट स्टेटसलाई बढावा गर्न सबै संयुक्त रूपमा काम गर्यौ भने यसले कुनै पनि समय लामो समयको वक्र माथि बढ्न अनुमति दिन सक्दैन ।
त्यसैगरी Sixit Bhatta, CEO of Tootleले स्केलिंगमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो कि उद्यमीहरूले नेपालमा SME विकास गर्न फोकस गर्नुपर्छ ।्र उहाले भन्नुभयो, “आजका व्यवसायहरू अपग्रेड गर्न आवश्यक छ किनकि विद्यमान एसएमईको मानकीकरण बढाउने प्रतिकृतिमा परिणामहरू स्केलिंग गर्दछ । यसको लागि, प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्रविधिले हरेक क्षेत्रलाई अपग्रेड गर्न सक्छ । खेती होस् या पर्यटन या खाना वा गतिशीलता।”
अर्कोतर्फ, जब उद्यमीहरूलाई ऋणको लागि वित्तीय संस्थाको प्रावधानको बारेमा सोधियो, NWC एसएमईको पहिलो उपाध्यक्ष सुम्मा शर्माले भन्नुभयो,“ चीजहरू पहिले नै परिवर्तन भएको छ। आजकल, सरकार अधिक अनुदानको नीतिहरु संग आएको छ । ऋणको ब्याज दरले ठूलो परिवर्तन गरेको छ र अहिले, राम्रो विचारधारा भएका उद्यमीहरूले न्यूनतम संपार्श्िवकसँग ऋणको मूल्यांकन गर्न सक्छन् ।”
दोश्रो प्यानल Business Coalition of SDGs’ मा चार प्यानल सदस्य Renaud Meyer (Country Director, UNDP); Anukool Bhatnagar (CEO and MD, Nepal SBI Bank) र Sudhakar Jayaram (CEO, Nepal Mediciti Hospital)
को साथ सुरु भएको थियो, जसको मध्यस्तर ग्लोकल प्रा. लीका कार्यकारी निर्देशक आशिष ठाकुरले गर्नु भएको थियो ।
कसरी एस डी जी व्यवसायहरू प्रभावित र प्रभाव हुन सक्छ?
Renaud Meyer (यू एन डीपीका देश निर्देशक) “एसडीजीहरू व्यापार बिना पाउनेछैनन् । यो महत्वाकांक्षी एजेन्डा हो र व्यापारमा मूल्यवान महत्वाकांक्षी छ । हामीले राष्ट्रलाई राष्ट्र परिवर्तन गर्न पर्खनु हुँदैन तर यो परिवर्तन हो जुन हामीन हौ । एस डी जीहरू कार्यक्रमको रूपमा नलीकन, दिनको गतिविधिको रूपमा लिइनुपर्छ ।
“तपाईं आफैलाई कसरी जिम्मेवार व्यवसाय धारकको रूपमा लिनुहुन्छ?”
अनुकुल भटनागर (नेपाल एस बि आई बैंक मा सीईओ र एमडी) “एस डी जीको लक्ष्यमा ध्यान लिदा हामीले ठलो समूहमा सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। हामी सर्वोत्तम रुपमा कार्यान्वयन गर्दै, सर्वोत्तम पैसा र विकासको लागि काम गर्छौ । एक सफल र जिम्मेवार व्यवसाय धारक बन्नको लागी एक सामाजिक जिम्मेवारीको पनि भान हुनु पर्छ जब समाजले हाम्रो कामलाई मनपाराउछन, अधिक व्यापार पनि बढछ । यदि तपाइँ केहि कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, आफैलाई गर्नुहोस् ।
“यी संस्थाहरूले साझेदारीको सिर्जना गर्ने वा सोच्ने कुरा गर्दछ?”
सुभाकर जयराम (नेपाल मिडीसीटी अस्पतालमा सीईओ) “जब संगठनले साझेदारीलाई निर्माण गर्दछ, सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ। यसले मानिसहरूलाई एकजूट भइ काम गराउछ ।
“यदि तपाईले अरु व्यतिलाई SDG को भागेदार हुन एक ट्याग लाइन दिनु पर्ने खण्डमा के दिनु हुन्छ?”
सुभाकर जयरामस्- आत्म जागरूकता र आन्तरिक सम्बन्ध ।
अनुकुल भटनागर - अभिनव र उत्पन्न ।
कार्यक्रमको अन्तिम प्यानल छलफलको विषय Practice of Skill Based Education रहेको थियो ।
मुख्य उदेश्यको लागि एक द्रिस्तिकोनको साथ, Diptee Acharya, Director/Principal, Sanskriti International School; Samir Thapa, CEO, Silver Mountains र Saurabh Jyoti, Director, Jyoti Group प्यानलको लागि वोर्डमा सदस्य जनाएका थिए ।
Udgum Khadka, Education Designer ले अन्तिम प्यानलमा मध्यस्तरको रुपमा उपस्थित हुनु भएको थियो ।
Jyoti Group का निर्देशक सौरभ ज्योति नेपालका साक्षरता दरमा आफ्नो धारणा साझा गर्दै भन्नुभयो, “डाटाले नेपालका साक्षरता दर 65% भन्दा बढी देखाउँछ । तर, यदि हामी बजारको वास्तविक अवस्था परिदृश्यमा हेर्छौं, यी व्यक्तिका बीचको रोजगार दर धेरै कम छ । यसको कारण यो हो, आज, कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पेपर डिग्रीको आधारमा नियुक्त गर्दैनन् । उद्योगहरुले कौशल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्छन । त्यसैले, साक्षरता मात्र रोजगारीको गारंटी हैन, यदि तपाईंसँग व्यक्तित्व र नरम कौशलहरू छैन ।
“त्यस्तै गरी, जब मांगमा भएका कौशलहरूको बारेमा सोधियो, संस्कृत अन्तर्रा्ष्ट्रिय विद्यालयका निर्देशक दिप्ती आचार्यले भन्नुभयो,“ आजको युवाहरूलाई गलत धारणा हुन हुँदैन कि राम्रो शिक्षा पृष्ठभूमिले तपाईंलाई एक सम्वृद् जीवन दिन सक्छ । मांगमा मुख्य विशेषताहरु महत्वपूर्ण सोच, समानुभूति, संचार र तनाव संग सामना गर्ने क्षमता हो । अनि हाम्रो शैक्षिक संस्थानहरूले यी सबै गुण दिन जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
“त्यस्तै गरी, सिल्वर माउन्टको सीईओ समिर थापाले नेपालमा औद्योगिक संचालित पाठ्यक्रमको महत्त्व उल्लेख गरे । उनले भने, “हाम्रा शैक्षिक संस्थानहरू गल्ती गर्दैछन् कि उनीहरूले फैंसी र बेच्न योग्य पाठ्यक्रम सिर्जना गर्दैछन् । यसको मतलब, हामी बजारको लागि बिक्रियोग्य कर्मचारीहरू सिर्जना गर्न बाटोतिर लम्कदै छौ । हाम्रो उद्योगहरूले मानिसहरू खोज्ने कामहरू गर्न सक्छन् र यसका लागि, उद्योग सम्बंदी पाठ्यक्रम अनिवार्य छ ।हाम्रो उद्योगहरूले मानिसहरू खोज्ने कामहरू गर्न सक्छन् र यसका लागि, उद्योग सम्बंदी पाठ्यक्रम अनिवार्य छ ।"